DEG-DEG: Barcelona & Juventus Oo Heshiis Ka Gaadhay Saddex Ciyaartoy Oo Ay Lakala Wareegayaan. - Gool24.Net
DEG-DEG: Barcelona & Juventus Oo Heshiis Ka Gaadhay Saddex Ciyaartoy Oo Ay Lakala Wareegayaan.
Kooxaha Barcelona iyo Juventus ayaa heshiis ka gaadhay saddex ciyaartoy oo ay laba ka mid ah isku badalanayaan halka midka saddexaad ay Barcelona si toos ah u iibsanayso.
War hadda soo baxay ayaa sheegaya in Barcelona iyo Juventus ay heshiis buuxa ka gaadheen xidiga khadka dhexe ee Miralem Pjanic si la mid ah Mattia De Sciglio iyo Nelson Semedo oo ay isku badalanayaan.
Warkan ayaa xaqiijiyay in Barcelona ay ogolaatay dalab ay Juventus ku doonayso saxiixa Nelson Semedo kaas oo ay Barca ku qiimaysay 50 milyan euros waxayna Juventus qaadatay go’aanka ah in Miralem Pjanic iyo 25 milyan euros ay Barcelona kagala heshiisay adeega Semedo.
Waxaana la shaaciyay in 25 ka milyan euros ee la socda heshiiskan in ay Barcelona ku kordhin doonto dalabka ay kooxda Inter Milan kaga doonayso saxiixa Lautaro Martinez.
Dhinaca kale waxaa heshiiskan qayb ka ah De Sciglio kaas oo isna Barcelona ku biiraya waxayna wararku hadda xaqiijiyeen in heshiiska Semedo iyo Juventus uu dhamaystirmi doono saacado kadib halka heshiiska Miralem Pjanic iyo De Sciglio ee Barcelona uu haddaba yahay mid dhan.
Miralem Pjanic iyo De Sciglio ayaa kooxda Barcelona la gaadhay heshiiska shaqsiga ah halka labada kooxood ay heshiiskoodu yahay mid dhan laakiin in Juventus ay heshiiska shaqsiga ah la gaadho Semedo ayay saacado ka hadhsan yihiin.
Kooxaha Juventus iyo Barcelona ayaa ku heshiiyay in saddexdan ciyaartoy ay kooxaha isku badalan doonaan marka uu xili ciyaareedkani soo dhamaado.
Barcelona ayaa badalka tooska ah ee Nelson Semedo ka dhigan doonta Mattia De Sciglio kaas oo awood u leh in uu ka ciyaaro labada difaac ee bidixda iyo midig halka Semedo uu halyayga xulkiisa Portugal ee Cristiano Ronaldo uu kula midoobi karo Juventus.
Kooxaha Juventus iyo Barcelona ayaa muddo ku soo jiray wada hadalo iyada oo maamulka kooxda Juventus ay hore u shaaciyeen in labada kooxood ay wada xaajood ugu jiraan in ay ciyaartoy dhawr ah isku badalan doonaan.
Wali kooxaha Barcelona iyo Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqin heshiisyada Nelson Semedo, Mattia De Sciglio iyo Miralem Pjanic laakiin warbaahinta Spain iyo Italy ayaa hadda shaaciyay in heshiisyada saddexdan xidig yihiin kuwo ay labada kooxood isla meel dhigeen.